DOORASHADA LO'DA: TALOOYIN WAX KU OOL AH EE CUSUB - XOOLAHA
Ma fududa in aad hesho lo'da oo aad maanta sii haysato sida aad u malayn karto. Ka dib oo dhan, xayawaankan wuxuu u baahan yahay daryeel ku filan oo taxadar leh iyo kharashka dhaqaale ee dayactirka.
Laakiin dhibaatooyinkan ma joojinayaan jimicsi hiwaayadlayaal ah, oo haddana go'aansaday in ay iibsadaan lo'da oo ay ku degaan mooskooda.
Laakiin ka hor inta aadan iibsan tiro yar oo wakiil ah ee lo'dadan, waxaad u baahan tahay inaad barato shuruudaha ay tahay in lo'da kasta la qiimeeyo.
Marka dhan, haddii xaaladaha qaarkood la dayacay, markaa aad aad uga xumaan karto, gaar ahaan marka aad aragto qadar yar oo caano ah oo aad siin kartid.
Sidaa darteed, taxadar iyo feejignaan. Weli, iibso lo'da.
Calaamadaha ugu muhiimsan ee lo'da caafimaadka waa muuqaalkiisa. Dabcan, calaamadaha dibadda waa lagama maarmaan marka la qiimeynayo lo'da, laakiin isla markaa, kuma filna.
Marka laga hadlayo kalluunka xoolaha ee hiwaayadda, dusha sare ee xayawaanka ayaa door weyn ka ciyaara, maaddaama ay jiraan badanaa dukumentiyo xaqiijinaya jiritaanka tallaalka ama tilmaamayaasha waxsoosaarka waalidka.
Cow ah ayaa caano badan siin doona caloosha oo aad u sarreeya, maaha muruqyada gaar ahaan loo yaqaan, udders-ka iyo xoogaa lafaha oo xoog leh.
Xayawaan caafimaad leh, hababka dheef-shiidka iyo nuugista ayaa sida caadiga ah aad u wanaagsan.
Marka baarista laabta ay tahay inay fiiro gaar ah u yeelato meelaha isdhexgalka: Haddii ay ku filan yihiin, iyo feeraha, marka loo eego, waxay u eg yihiin xajmiga xajmiga dhabarka, markaa taasi waa wax fiican.
Sambabada ugu wanaagsan ee horumarsan iyo mugga ay ka weyn yihiin, masaafada u dhexeysa geesaha ku xiga. Xabadku waa inuu ahaadaa mid ballaaran oo qoto dheer oo ku filan inuu ka hooseeyo 10-15 cm suxulka.
Caloolku waa inuu ahaadaa qaab foorno ah oo uu ku filnaado. Waa in aanad soodhin wax badan oo aan aheyn mid aad u adag, maadaama ay tani tilmaamayso in nidaamka dheef-shiidka xayawaanka aan si fiican loo horumarin.
Lo'da oo si joogto ah u bixisa caano badan madaxa waa inuu iftiimaa, oo ka sii daray, oo leh gees yar oo khafiif ah. Qoorta waa in ay ahaato dhowr lakab oo maqaarka ah. Kiisaska waa in aan la tilmaamin, haddii kale waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in xayawaanka uu murqaha aad u liidan yahay.
Hase-yeeshe, waa in aan la arki karin, iyadoo tani ay muujinayso in lamaanaha lo'da ay aad u tabar yar yihiin.
Haddii dhabarka, laf-dhabarka iyo dhabarka jirka ee muuqaalkoodu yahay mid toos ah, xitaa dhererka dheer, markaa tani way fiicantahay.
Waa lagama maarmaan in la siiyo taxadar gaar ah oo la siiyo masruufka, taas oo ah xajmiga ballaaran ee aagga tuber-bararka. Dhimistu waa in aysan aheyn mid cidhiidhi ah, saqafka hoostooda ama hoos loo dhigo. Haddii masruufka uu yahay mid saqafka qaabaysan, markaa yaraantaasi waxay saamayn gaar ah ku yeelan kartaa xoogga lugaha cirridda lo'da.
Lugaha liicinta ee lo'da caanaha ayaa aad halis u ah. Qaansooyinka leh addimada sida ugu dhaqsaha badan ma istaagi karaan, socodka adoo ku adkaata, cagahaagana marar badan ayay taabtaan. Socodka daaqa waa mid aad u adag.
Maqaarka of a caanaha wanaagsan waa in ay ku filan dhuuban, cufan ee qaab dhismeedka, mobile iyo si fudud loo jiido farahaaga.
Dufanka ka hooseeya ama ma ahan dhammaan, ama aad u yar. Daboolka waa inuu ahaado mid dheer iyo dhuuban. Haddii saldhigga daboolka ahi uu qaro weyn yahay, ka dibna tani macnaheedu waa in lo'da ay tahay mid guud ah.
Marka aad dooranayso lo'da caanaha, waa in dareenka ugu badan la siiyo caanaha, maadaama uu yahay candho xoolo, ama halkii, cabirka iyo qaabka ugu fiican ee dhammaantood ka sheegi doona heerka waxsoosaarka lo'da.
Haddii lo'da wanaagsan tahay, ka dibna candho xoolo waa weyn, qadarin, oo leh timo jilicsan oo jilicsan.
Ka dib marka caanaha la ururiyo, miisaanka candhuuftu waa inuu hoos u dhacaa, oo leh dabaqyo maqaar ah oo loo yaqaan "stock of the candho xoolo."
Laalaabyadan waa in si sahlan loo jiidan karaa, hoosna waa inay noqdaan kuwa jilicsan.
Haddii lo'da ay tahay hilib-iyo-caano, ka dibna candho xoolo badani ma bedesho baaxadda ka dib markii la shiido, ama ma xoqin. Si aad u taabato marwalba waa mid cufan oo cufan leh.
Udder wuxuu noqon karaa qaabab kala duwan - qaab-qabad, qaab wareeg ah, riwaayad ah. Saxanka ugu wanaagsan ayaa loo tixgeliyaa geedka. Xaaladdan oo kale, waxay ku xiran tahay dhabarka, ballaaran oo ku filan, ka soo jeeda gadaashooda oo ku fidsan ku filan oo ay weheliso peritoneum.
Isbedelka udhaxeeya derbiga caloosha iyo dhinaca hore ee candho xoolo waa inuu noqdo mid aad u fiican, iyada oo aan la qabsasho. Qeybta ugu yaryar ee candho xoolo waa in ay ahaato guri, oo ku yaalla aagga hock iyo ku dhawaad ​​tiirsan.
Haddii candho-ilaaliyuhu uu wareegsan yahay, saldhigiisuna way yar yahiin.
Xagasha udhaxeysa derbiga hore iyo peritoneum waa qiyaastii 90. Suuqyada Udder waxaa loo sameeyaa si kala duwan. Caanaha duqa ah ayaa noqda, in badan oo ah candhuufta noocaas oo kale ah ayaa degi doonta, si dhaqso ah u nadiifin, mararka qaarkoodna waa la dhaawacayaa, taas oo adkaynaysa xayawaanku inuu guuro.
Cunto ari ah waa saxgy, lakabka hore ayaa si aad ah u liita. Sideways qaab ah, waxay u egtahay saddexagal. Haddii lo'da uu leeyahay marmarka ariga, ka dibna wax soo saarkeedu wuxuu noqon doonaa mid aad u hooseeya..
Haddii candho xoolo si fiican loo horumariyo, ka dibna si fiican ayaa loo horumariyay oo dhan 4 dhejis, oo u dhexeeya iyaga oo aan lahayn jeexjeexin qoto dheer.
NIP-yada waa in ay leeyihiin qaab cylindrical ama daciif ah, oo si ku filan u fog midba midka kale, dhumucda dhexdhexaad ah, dhererka 6-8 cm Haddii ibta naasku gaaban tahay ama aad u liidata, si aan fiicnayn, caanaha waa sida caanaha. Haddii ibta naasku ay aad u dhuuban tahay, lo'da waxay luminaysaa caanaha marka la socdo. Haddii ibta naasku ay aad u weyn tahay, markaa way adkaan doontaa in caanaha laga saaro.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la baaro xididdada caanaha, kuwaas oo ku yaal maqaarka hoostiisa labada dhinac ee caloosha hoose, iyo xididada candho xoolo lafteeda lafteeda ah. Haddii xididada si fiican loo horumariyo, taasi waa, waxay u muuqdaan kuwo muuqaal ah oo muuqda, aad u qaro weyn iyo midab leh, taasi waxay muujinaysaa in dhiigga u gudbaayo naaska uu yahay mid aad u fiican, sidaas darteedna waxaa jira caano badan.
Haddii lo'da caafimaad leh lagu aqoonsan karo muuqaalkiisa iyada oo aan si taxadar leh loo kormeerin.
Waxa kale oo muhiim ah da'da xayawaanka. Haddii lo'da ay u muuqato mid faraxsan, indhaheedu way cad yihiin, iyada oo aan barar lahayn, lo'da kuma qufacayso, si fudud oo si adag u socoto, markaa xayawaanku waa caafimaad.
Maqaarku waa inuu si siman u daboolaa timo gaaban, oo siman.. Ma jiraan wax buro ama shaabad leh oo ku yaala candho xoolo. Nidaamyada oo dhan waa in ay si buuxda u shaqeeyaan, waana inayna noqonin dildilaacyo, boogo, xoqid iyo boogo.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan caanaha lo'da.
Sida da'da, lo'da waa inaysan noqon mid aad u weyn.
Haddii lo'da lagu qalo in ka badan 8 jeer, ka dibna wax soo saarkiisa waa la dhimi doonaa. Sidaa darteed, waa inaad iibsataa lo'da, kaas oo la dhalaalayay 4-5 jeer.
Cows yar yar oo dhaley wax ka badan hal mar, waxsoosaarku maaha mid aad u sarreeya sida xayawaankii hore u ahaa.
Iyadoo talooyinkan maskaxda lagu hayo, xulashada lo'da wanaagsan si aad u hesho caanaha ma noqon doonto mid aad u adag. Xaqiiqdii ma khaldami kartid. Nasiib wacan